Abiye Axmed oo Diiday inuu la Kulmo Madaxweynayaal & Siyaasiyiin Caan ka ah Somalia – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Abiye Axmed oo Diiday inuu la Kulmo Madaxweynayaal & Siyaasiyiin Caan ka ah Somalia
Sabti, December, 8, 2018(HNN)Ra’iisul wasaaraha Dalka Itoobiya Abiye Axmed uu diiday inuu la kulmo qaar ka mid ah Madaxweynayaasha Maamul Gobaleedyada iyo Siyaasiyiin saameyn ku leh siyaasadda Soomaaliya.
Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa labo jeer ku guul dareystay inay la kulmaan Abiye Axmed oo ay dano siyaasadeed kaga xiran yihiin sida ilo ku dhow ay inoo sheegeen.
Sarkaal ka tirsan Madaxtooyada Soomaaliya ayaa inoo sheegay in Abiye Axmed uu Dowlada Federaalka Soomaaliya ka balanqaaday inuusan kulan la yeelaneyn Masuuliyiin ka socda Mucaaradka Dowlada iyo Madaxweynayaasha Maamul Gobaleedyada oo Xiriir uusan kala dhaxeyn Dowlada Dhexe.
Cabdi Weli Maxamed Cali Gaas iyo Axmed Madoobe ayaa doonaya inay Itoobiya kala hadlaan Tabashooyin ay ka qabaan Dowlada Federaalka balse Ra’iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka fogaana inuu xumaado xiriirka Diblumaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Itoobiya oo meel fiican maraya.
Inkastoo aanan la wada shaacin Magacyada Siyaasiyiinta saameyn ku leh Soomaaliya ee loo diiday inay la kulmaan Abiye Axmed ayaa hadana loo badinayaa inay ku jiraan kuwa ugu caansan Mucaaradka iyo kuwa Xilal sare kasoo qabtay Dowladihii hore.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa hore u sheegay inuu adkeeyey Madaxbannaanida iyo ilaalinta qarannimada Soomaaliya, isagoona sheegay in xiriir iyo heshiis kasta ay la galeen caalamka uu ku salaysnaa soo celinta magaca Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo sare u qaadista maqaamka ay ku leedahay dunida.
Abiye Axmed oo Diiday inuu la Kulmo Madaxweynayaal & Siyaasiyiin Caan ka ah Somalia added by Ciise Cabdi Ciise on December 8, 2018